भनिन्छ– अचेल हाम्रो दुनियाँ दुइटा भइसकेको छ। एउटा भर्चुअल, अर्काे रियल। भर्चुअल दुनियाँ र रियल दुनियाँ एकापसमा घुल्न थालेका छन्।
खाना अर्डर गर्नेदेखि मोटरसाइकल, ट्याक्सी बोलाएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान आजभोलि अनलाइन एप प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै एउटा एप अहिले भर्चुअल दुनियाँमा रमाउने युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय छ। त्यो ‘डेटिङ एप’ हो।
प्रवेश शर्मा (नाम परिवर्तन ) ले ‘टनटन डेटिङ एप’ प्रयोग गर्न थालेको सात महिना भयो। उनी एक रेस्टुरेन्टका म्यानेजर हुन्। ‘एप डाउनलोड गरेर सात महिनामा १४ जना केटीसँग डेट गइसकेँ,’ उनले भने, ‘तीमध्ये कति साथी मात्रै बने, कति चाहिँ साथीभन्दा माथि। साथीभन्दा माथि बनेकाहरू एक रात भेटिन्छन्, अर्को रात छुटिन्छन्।’
‘टनटन’, ‘टिन्डर’, ‘बडू’, ‘ह्यापेन’ संसारमा प्रचलित अनलाइन डेटिङ एप हुन्। यीमध्ये टिन्डर हाल सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिन्छ। युरोप, अमेरिकामा टिन्डर धेरै चलाइन्छ। करोडौँले यो एप चलाइरहेका छन्। टनटन भने चाइनिज डेटिङ एप हो। दक्षिण एसियाली मुलुकका युवा पुस्तालाई लक्ष्य गरी बनाइएको टनटनका प्रयोगकर्ता पनि करोडौँको संख्यामा छन्। बडू र ह्यापेन भने भारतमा बढी प्रचलित डेटिङ एप हुन्। युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय यी डेटिङ एप ‘वान नाइट स्ट्यान्ड’ र ‘हुक अप’का लागि प्रयोग गर्दै आएको अधिकांश प्रयोगकर्ता बताउँछन्।
डेटिङ एप नेपालका लागि नयाँ अवधारणा हो। पछिल्लो समय टनटन, टिन्डरसँगै ‘म्याट्रिमोनियल नेपाल’, ‘क्युपिड’ आदि पनि नेपाली युवाले मन पराएका अनलाइन डेटिङ एप हुन्। नेपालका मुख्य शहर काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, बुटवल, धनगढी आदिमा टनटन र टिन्डरका प्रयोगकर्ता बढी छन्।
यसरी चलाइन्छ डेटिङ एप
डेटिङ एप डाउनलोड गरेपछि प्रोफाइल बनाइन्छ। एप खोलेपछि आफ्नो नाम, तस्बिर, उमेर, लिंग, व्यवसाय र रुचि लगायतका जानकारी पेश गर्नुपर्छ। त्यसपछि व्यक्तिको प्रोफाइल तयार हुन्छ। उदाहरणका लागि, टनटनमा स्वाइप राइट गर्दा व्यक्तिप्रति रुचि भएको भन्ने बुझिन्छ। र, स्वाइप लेफ्ट गर्दा व्यक्तिप्रति रुचि नभएको कुरा एपले जनाउँछ। स्वाइप राइट गर्दा अर्को व्यक्तिले पनि स्वाइप राइट गरेपछि मात्र साथी बन्न मिल्छ। त्यसपछि अनलाइनमा कुराकानी हुन थाल्छ।
भेट, डेट र बेड
२३ वर्षीय मन्जेश (नाम परिवर्तन) इन्जिनियरिङका विद्यार्थी हुन्। उनको वर्षदिनअघि गर्लफ्रेन्डसँग ब्रेकअप भयो। ब्रेकअपपछि उनी सबै कुरा बिर्सेर जिन्दगी अगाडि बढाउन चाहन्थे। ‘एक पटक ब्रेकअप भइसकेपछि मलाई फेरि लभ–सभको चक्करमा पर्नु थिएन,’ मन्जेशले भने, ‘ब्र्रेकअपको ह्याङओभर मेटाउन अनेक उपाय अपनाएँ। छ महिना उपाय खोज्नमै बित्यो।’ एक दिन मन्जेशले डेटिङ एप टनटनबारे थाहा पाए। ‘साथीहरू सबै गर्लफ्रेन्ड च्यापेर हिँड्थे,’ उनले भने, ‘त्यो देखेर मलाई पनि रमाइलो गर्न एउटा केटी साथी बनाऊँ–बनाऊँ लाग्यो, टनटन इन्स्टल गरेँ। त्यसपछि सुरु भयो स्वाइप राइट र स्वाइप लेफ्टको खेल।’
उनी अहिलेसम्म स्वाइप राइट गरेर थुप्रै केटीसँग साथी बनिसके। ‘सुरुमा म्याच भएका केटीहरूसँग सामान्य कुरा हुन थाल्यो,’ मन्जेशले भने, ‘बिस्तारै डेटिङ। त्यसपछि केटीहरूसँग वन नाइट स्ट्यान्ड हुन थाल्यो।’ टनटनमा भेटिएका केटीहरूसँग ‘एक रात बिताउने’ गरेपछि उनले प्रेम–बिछोडको पीडा भुलेको बताए। ‘टनटनलाई धेरै–धेरै धन्यवाद !’ उनले भने, ‘डेटिङ एपमा पहिलो पटक भेट हुन्छ, दोस्रो पटक डेट हुन्छ र अनि त्यसपछि बेड हुन्छ।’ आफूहरूबीच सबै कुरा सहमतिमा हुने उनले बताए। ‘तर, जति जनासंँग बोलिन्छ, त्यति जनासँगै फिजिकल भने भइँदैन,’ उनले भने, ‘यस्ता एपबाट केही अपेक्षा हुँदैन। अन्त्यमा पेन पनि हुँदैन, गेन पनि हुँदैन। फिजिकल भइसकेपछि को कता गयो, के गर्छ, बाल हुँदैन।’ उनले यस्ता एप वान नाइट स्ट्यान्डकै लागि प्रयोग हुने बताए। ‘यो कुरा प्रयोग गर्ने सबैलाई थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘टनटनबाट मैले अहिलेसम्म १० जना महिलामध्ये चार जनासँग वान नाइट स्ट्यान्ड गरिसकेँ। डेटिङ एपको मज्जै यही हो।’
बिछोड भुल्न डेटिङ एप
२५ वर्षीय राकेश (नाम परिवर्तन) सिभिल इन्जिनियरिङका विद्यार्थी हुन्। केही समयअघि उनको सात वर्ष लामो प्रेम सम्बन्ध टुंगियो। ब्रेकअपको पीडाबाट मुक्त हुने खोजिरहेका उनले ‘पपुलर डेटिङ एप इन नेपाल’ भनेर गुगल गरे। गुगलले ‘टनटन’, ‘टिन्डर’, ‘बडू’, ‘ह्यापेन’ लगायत एप देखायो। यीमध्ये राकेशले प्लेस्टोरबाट टनटन डाउनलोड गरे र त्यसमा आफ्नो प्रोफाइल बनाए। एपमा केटीहरूसँग उनको म्याच बढ्दै गयो। उनले च्याट सुरु गरे। ‘टनटनमा म्याच भएका जतिसँग भ्याएसम्म च्याट गरेर टाइम पास गर्न थालेँ,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाए, ‘च्याट गरेकामध्ये कति जनासँग त डेट पनि गइयो। डेटिङका लागि आफैँ एप्रोच गर्ने केटीहरू पनि हुन्छन्। उनीहरू आफैँले एप्रोच गरेपछि हामीले नकार्ने कुरै भएन।’
अहिले राकेश ‘ड्रिंक्स’ र ‘सेक्स’का लागि टनटन चलाउने गरेको बताउँछन् । ‘यति भएपछि आफ्नो डिजायर पूरा गर्न सेक्स वर्कर खोज्दै हिँड्नु परेन,’ उनले भने, ‘सहमतिमै कोही त मेरै कोठामा आइपुग्छन्। गाँठ हुनेहरूले चाहिँ होटलमै बोलाउँछन्। जति जनासँग फिजिकल भए पनि इमोसनल भने कसैसँग भइँदैन।’
पोखराकी २३ वर्षीया मीना (नाम परिवर्तन) एयरहोस्टेस हुन्। तीनवर्षे प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न चाहन्थिन्, उनी। बिहे नजिकिँदै गर्दा प्रेमीले उनलाई धोका दिए। बिहेप्रति नै उनलाई अरुचि भयो। उनी विगत आठ महिनादेखि नियमित रूपमा अनलाइन डेटिङ एप ‘टनटन’, ‘टिन्डर’ र ‘ह्यापेन’ चलाइरहेकी छिन्। ‘केटाहरूले जति जनासँग रिलेसन बनाउँदा पनि हुने, हामीले नहुने ?’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूले हर्ट गर्न हुने, हामीले नहुने ? त्यसैले आजभोलि म आफ्नै तालले फ्री भएर हिँड्न थालेकी छु।’ तर, एपबाट भेटिएका केटाहरूसँग प्रेमीसँगजस्तो भावनात्मक सम्बन्ध नहुने उनले बताइन्। ‘तैपनि सबै कुरा भुलेर अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म तीन जनासँग सेक्स र डेट गरिसकेँ। एप ‘टनटन’, ‘टिन्डर’ र ‘ह्यापेन’ ले मलाई नयाँ तरिकाले जीवन जिउन सिकाएका छन्।’
मिंगल हुने उपाय
सिंगलका लागि डेटिङ एप उपयोगी भएको बताउँछिन्, २४ वर्षीया करुणा (नाम परिवर्तन)। उनी आईटीमा स्नातक गर्दै छिन्। अधिकांश समय फेसबुकमा बिताउने उनको म्यासेन्जरमा जहिल्यै ‘टनटन–डेट फर रियल’ भनेर नोटिफिकेसन आइरहन्थ्यो। एक दिन उनले ‘के रहेछ ?’ भनेर आफ्नो खुलदुली मेटाउन यो एप डाउनलोड गरिन्। त्यसपछि एपले मागेअनुसार जानकारी दिइन्। र, आफ्नो प्रोफाइल बनाइन्। करुणाको प्रोफाइलमा अत्यधिक म्याच आए। ‘म्याच भएका अधिकांश केटाले भेटाँै भन्थे,’ उनले भनिन्, ‘सिंगल थिएँ। आफूलाई राम्रो लागेका एकदुई जनासँग डेट जान थालेँ। यसरी भेटेको धेरैले फिजिकल हुनका लागि एप्रोच गर्थे। जो पायो त्यहीसँग फिजिकल हुनु हुँदैन भन्नेमा म सजग थिएँ।’
म्याच भएका केटाहरूसँग उनी लामो समय कुरा गर्न थालिन्। ‘‘म तिमीलाई चिन्दिनँ, तिमी मलाई चिन्दिनौ, एक दिन फिजिकल हुँदैमा के हुन्छ र ?’ एक दिन एउटा केटाले यस्तै भन्यो,’ करुणाले भनिन्, ‘मलाई पनि हो कि क्या हो जस्तो लाग्यो। त्यसको एक हप्तामा त्यही केटासँग फिजिकल रिलेसन भयो। त्यसपछि त्यो केटा कहाँ गयो, अत्तोपत्तो छैन।’ डेटिङ एप सिंगल र यौन चाहना पूरा गर्नेले धेरै चलाउने उनको अनुभव छ। ‘फिजिकल हुनुअघि जो पनि राम्रो बोल्छन्,’ करुणा भन्छिन्, ‘जब उनीहरूको चाहना पुरा हुन्छ, तब सम्पर्कविहीन भइदिन्छन्।’ अनलाइनमा भेटेका साथीहरूबाट खासै ठूलो अपेक्षा नराखिने भएकाले उनीहरू टाढा भए पनि आफूलाई पीडा नहुने उनी बताउँछिन्। ‘यस्ता एपमा वर्षौंदेखि भर्चुअल संगत गरेको मान्छे भेटेको भोलिपल्टदेखि अपरिचित भइदिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘डेटिङ एप रमाइलोका लागि हो। यहाँ कसैको विश्वास भने गर्नु हुँदैन।’
प्रवेश (नाम परिवर्तन) ले टनटन प्रयोग गर्न थालेको सात महिना भयो। उनी एक रेस्टुरेन्टका म्यानेजर हुन्। उनले मिल्ने साथीसँग एक दिन ‘सिंगल लाइफ बोर लाग्न थाल्यो’ भन्दै गुनासो गरे। ‘साथीले मलाई ‘जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, तँ भने जहाँको तहीँ छस्’ भनेर उडायो,’ उनले भने, ‘‘टनटन डाउनलोड गर्, त्यसपछि त केटीहरूको लाइन लाग्छ’ भनेर उसले हौस्यायो।’ साथीको सल्लाहअनुसार उनले टनटन चलाउन थाले। ‘एप डाउनलोड गरेर सात महिनामा १४ जना केटीसँग डेट गइसकेँ,’ उनले भने, ‘तीमध्ये कति साथी मात्रै बने, कति साथीभन्दा माथि। साथीभन्दा माथि बनेकाहरू एक रात भेटिन्छन्, अर्को रात छुटिन्छन्।’ एपमार्फत भेटिने प्रायःले आफ्नो परिचय लुकाउने गरेको उनको अनुभव छ। ‘सोध्यो भने पनि उल्टोसुल्टो नाम र ठेगाना बताउँछन्,’ उनले भने, ‘एक रातका लागि आफू पनि खासै खोजीनिती गरिँदैन। कुरा मिल्नेसँग वान नाइट स्ट्यान्ड गरिन्छ। अर्काे दिनबाट दुवै आ–आफ्नो बाटो !’
एपबाट भेटिएकासँग पहिलो सेक्स
२४ वर्षीया आकांक्षा (नाम परिवर्तन ) नर्स हुन्। पढाइ र कामको व्यस्तताले प्रेम सम्बन्ध बनाउन फुर्सद नभएको बताउने उनी टिन्डरकी प्रयोगकर्ता हुन्। साथीले भनेपछि उनले टिन्डर डाउनलोड गरिन्। ‘टिन्डर र टनटनबारे सुनेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘तर, यी कस्ता चिज हुन् भन्ने थाहा थिएन। डाउनलोड गरेपछि फुर्सदमा टिन्डर चलाउन थालँे। त्यहाँ त आफूले खोजेजस्तै साथी रोज्न सकिने रहेछ।’ आफूसँग कुरा मिल्ने साथी बनाएर उनी डेट जान थालिन्। त्यहीँबाट सुरु भयो उनको वन नाइट स्ट्यान्डको सिलसिला। ‘म पढाइ र कामले गर्दा धेरै डिप्रेस्ड थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘सबै साथीका ब्वाइफ्रेन्ड थिए। म सधैँ एक्लो महसुस गर्थें। भएन, अब जीवनमा केही रमाइलो पनि गर्र्नुपर्‍यो भनेर टिन्डरबाटै ड्युटी नपरेको दिन वन नाइट स्ट्यान्ड जान थालँे।’
छ महिनादेखि टिन्डर चलाउँदै आएकी उनले टिन्डरबाटै भेटिएका एक जना पुरुषसँग पहिलो पटक सेक्स गरेको बताइन्। ‘साथीहरूले सेक्स गरेको अनुभव सुनाउँदा मलाई पनि खुलदुली हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘करिअरको कारण बिहे गर्ने मुडमा पनि थिइनँ। त्यसैले एक दिन टिन्डरबाट भेटिएको एक जना केटासँग मैले आफ्नो भर्जिनिटी बे्रक गरेँ। दुई पटक सम्म हामीले सँगै रात बिताएका छौँ। अहिले भने हामी दुवै सम्पर्कविहीन छौँ।’
२३ वर्षीया पूजा (नाम परिवर्तन) बीबीएस पढ्दै छिन्। उनीसँग पनि ह्यापेन, टिन्डर, टनटनलगायत एप चलाएको अनुभव छ। घरबाट बिहेको प्रेसर आएपछि उनले डेटिङ एपमार्फत जीवनसाथी खोज्ने निधो गरिन्। ‘घरबाट जहिल्यै बिहेको प्रेसर आउँथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘‘ब्वाइफ्रेन्ड छ भने भन, नभए हामीले खोजेको केटासँग बिहे गर्नुपर्छ’ भन्न थाल्नुभयो। आमाबुबाले खोजेको भन्दा डेटिङ एपमा आफ्नो मन मिल्ने साथी भेटिएला भन्ने लाग्यो।’ एपबाटै भेटिएका एकदुई जनासँग डेट गएर हेरिन्। ‘तर, आफुले भनेजस्तो पार्टनर भेटिएन,’ उनले भनिन्, ‘सुरुमा जेन्टल देखिनेहरू पनि संगत गर्दै गएपछि खत्तम भएको पाएँ।’ एकताका उनी टनटनबाट भेटिएका एक जनासँग प्रेम सम्बन्धमा पनि थिइन्। ‘केही समय हामी रिलेसनसिपमा पनि बस्यौँ,’ उनले आफ्नो अनुभव साटिन्, ‘केटा राम्रै थियो। मैले आफ्नो भर्जिनिटी उसैसँग तोडँे। तर, दुईचार पटक सँगै रात बिताएपछि उसले मलाई इग्नोर गर्‍यो। सम्पर्कविहीन भयो। मैले पनि वास्तै गरिनँ।’
डेटिङ एपमा टाइमपास
ललितपुर, नख्खुका ३५ वर्षीय विनय (नाम परिवर्तन ) ट्याटू आर्टिस्ट हुन्। विवाहित विनयका सात वर्षीय छोरा छन्। झट्ट हेर्दा अविवाहितजस्तो देखिने विनय भन्छन्, ‘श्रीमतीसँग मनमुटाव हुँदा, ऊ माइत जाँदा टनटन चलाउँछु। केटीहरूसँग क्लब जान्छु र ह्याङआउट गर्छु।’ श्रीमतीसँग माइत गएको मौका पारेर उनले धेरै पटक टनटनमार्फत भेटिएका केटीसँग रात बिताएका छन्। ‘डेटिङ एप त हाम्रा लागि वरदान हो।’
२८ वर्षीय अनुप (नाम परिवर्तन) टुरिस्ट गाइड हुन्। उनी टिन्डर र टनटन चलाउँछन्। ‘अधिकांश समय देशका कुनाकाप्चा घुमेर बिताउँछुु,’ उनले भने, ‘गाउँघरमा नेट हँुदैन। काठमाडौँ आएपछि म त टिन्डर र टनटनमै झुन्डिरहेको हुन्छु।’ यी डेटिङ एपले जिन्दगी रमाइलो बनाएको उनको भनाइ छ। ‘डेटिङ एपमा कसैसँग पनि भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिदैन,’ उनले भने, ‘एकदुई दिनका लागि साथी खोज्ने हो। टिन्डर र टनटनमा भेटिइने केटीहरू ब्रोड माइन्डेड हुन्छन्। वन नाइट स्ट्यान्ड र हुक अप उनीहरूका लागि नर्मल हुन्छ। एप्रोच गर्दा ‘नाइँ’ भन्दैनन्। आपसी सहमतिमै भेट र सेक्स हुन्छ। यसले दुवैलाई हानि गर्दैन।’
बिहे गर्ने योजना
भर्खरै युरोपबाट फर्किएका हुन्, २६ वर्षीय जेनिस (नाम परिवर्तन)। एक वर्षदेखि उनी टिन्डरका नियमित प्रयोगकर्ता हुन्। युरोप र अमेरिकातिर विवाहित÷अविवाहित दुवैमाझ टिन्डर निकै लोकप्रिय भएको उनले बताए। ‘अधिकांश युरोपियनको मोबाइलमा टिन्डर हुन्छ,’ उनले भने, ‘वान नाइट स्ट्यान्डलाई त्यहाँ सामान्य मानिन्छ। त्यहाँको हावाले छोएर मैले पनि टिन्डर चलाउन थालेँ।’ धेरैजसोले टिन्डर वन नाइट स्ट्यान्डका लागि प्रयोग गरेको उनको अनुभव छ। ‘टिन्डरबाट चार जना केटीहरूसँग डेट पनि भयो, सेक्स पनि भयो,’ उनले भने, ‘भर्खरै मात्र एक जना मन मिल्ने साथी भेटेको छु। अहिले हामी अफेयरमा छौ। छिट्टै बिहे गर्ने योजना छ। त्यसैले अहिले मोबाइलबाट हामी दुवैले टिन्डर उडाइदिसक्यौँ।’
वार्निङ दिँदा पनि चलिरहन्छ ‘सेक्सटिङ’
अनलाइन च्याटिङका क्रममा ‘सेक्सटिङ’ अर्थात् सेक्स च्याट वा अश्लील तस्बिर सेयर गरेको थाहा पाएमा टनटन र टिन्डरलगायत कतिपय एप स्वयंले चेतावनी पठाउँछन्। यस्ता चेतावनीको वास्तै नगरी कतिपय जोडी भने बेपर्वाह सेक्सटिङ गरिरहने बताउँछन्। टनटन प्रयोगकर्ता २७ वर्षीय राजु (नाम परिवर्तन) सेक्सटिङका अम्मली हुन्। ‘छाडा शब्द र तस्बिर सेन्ड हुनुअघि टनटनले वार्निङ साइन दिन्छ,’ उनले भने, ‘कुरा गरिरहेको पार्टनरले दिक्क लगाएको वा हिंसात्मक व्यवहार त गरिरहेको छैन भनेर चेतावनी दिन्छ। तर, सेन्ड भने गर्न मिल्ने भएकाले वार्निङको वास्तै नगरी च्याट जारी राखिन्छ।’ आफू अन्तर्मुखी स्वभावका भएकाले हत्तपत्त केटीहरूसँग नभेट्ने गरेको राजुले बताए। ‘केटीहरूसँग भेटेर कुरा गर्न मन लाग्दैन,’ उनले भने, ‘त्यही भएर धेरैजसो सेक्सटिङ र न्युड तस्बिर सेयर गरेर आनन्द लिने गरेको छु। मलाई त सेक्सटिङको लत लागिसक्यो।’
साथी मात्रै पनि बन्न सकिन्छ
अनलाइन डेटिङ एपमा वान नाइट स्ट्यान्ड मात्र नभएर युवायुवतीले फरक तरिकाले समेत सम्बन्ध स्थापित गर्ने गरेको बताए। अनुपम (नाम परिवर्तन) मार्केटिङ म्यानेजर हुन्। उनी दुई वर्षयता टिन्डर र टनटन प्रयोग गरिरहेका छन्। ‘मैले अनलाइनमा टनटन र टिन्डर एपको विज्ञापन देखेँ,’ उनले भने, ‘के रहेछ भनेर चलाएँ। अहिले त्यसैबाट मैले एक जना बेस्ट फ्रेन्ड बनाएको छु। डेटिङ एप भन्नेबित्तिकै कसैसँग वान नाइट स्ट्यान्ड गर्नैपर्छ भन्ने छैन।’
२९ वर्षीय रविन (नाम परिवर्तन) को धारणा पनि समान छ। ‘म एक्लो भएको र दिक्क लागेको बेला टिन्डर र टनटन चलाउँछु,’ उनले भने, ‘मन परेको केटी भेट्नेबित्तिकै फिजिकल भइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। उनीहरूलाई साथी बनाएर र भेटेर गफगाफ गर्न सकिन्छ। नयाँ साथी बनाउन यस्तो एप उपयोगी हुन्छ।’
‘प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्छ’
केन्द्रीय साइबर ब्युरो, काठमाडौँ, भोटाहिटीका एसपी रेवती ढकाल अनलाइन डेटिङ एप प्रयोग गर्दा निकै ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने बताउँछन्। ‘इन्टरनेटबाट जोडिएका सम्बन्धहरू भावनात्मक नहुने हुनाले विचार पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विचार नपुर्‍याउँदा यसरी स्थापित भएको सम्बन्धले पछि अपराधको रूप लिन सक्छ।’
अधिवक्ता बाबुराम अर्याल डेटिङ एप आफैँमा नराम्रो नभएको बताउँछन्। ‘प्रविधिले दिएको यो सुविधालाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौँ,’ उनले भने, ‘कसैले जानीजानी एपको दुरुपयोग गर्छ भने त्यो एपको गल्ती होइन, प्रयोगकर्ता दोषी हुन्।’
‘डेटिङ एपले अपराध निम्त्याउन सक्छ’
एसपी रेवती ढकाल
केन्द्रीय साइबर ब्युरो, भोटाहिटी, काठमाडौं
अहिलेका पुस्ता स्वतन्त्र हुन मन पराउँछन्। उनीहरू आफ्नै किसिमको जीवन बाँच्न चाहन्छन्। युवायुवतीका लागि इन्टरनेटमार्फत ‘सेक्सिटङ’ र ‘नेकेड’ तस्बिर आदानप्रदान गर्नु सामान्य भइसकेको छ। यसले हाम्रो समाज कतातिर गइरहेको छ भन्ने प्रश्न जन्माउँछ।
ब्युरोमा ‘फेसबुक’, ‘म्यासेन्जर’, ‘भाइबर’ र ‘इमो’ बाट हुने गरेका साइबर अपराधहरू धेरै आउँछन्। अनलाइन डेटिङ नेपालमा नयाँ भएकाले यससँग सम्बन्धित समस्या हामीसम्म आइपुगेका छैनन्। यद्यपि, भविष्यमा यसले विकराल रूप लिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। डेटिङ एपले अपराध निम्त्याउन सक्छ। किनभने, इन्टरनेटमा जतिसुकै लामो–छोटो र राम्रो–नराम्रो सम्बन्ध भए पनि एकलाई चित्त नबुझ्नेबित्तिकै अर्काको कुरा बाहिर आइहाल्छ।
अनलाइन डेटिङ एपबाट सम्बन्ध दिगो हुँदैन। उनीहरू एकअर्काप्रति प्रतिबद्ध हुँदैनन्। पार्टनरसँग आपसी सहमतिमा सम्बन्ध राख्छन्। यौन चाहना पूरा गर्ने र त्यसपछि अलग्गिने सहमति उनीहरूबीच हुन्छ। यसले एकछिनको यौन चाहना त पूरा गर्ला, तर भविष्यमा यसले अपराधको रूपसमेत लिन सक्छ।
अनलाइन डेटिङ जानु र वान नाइट स्ट्यान्ड गर्नु एकदमै संवेदनशील विषय हो। अहिलेका पुस्ताले यस्ता कुरालाई सामान्य रूपमा लिए पनि यो हाम्रो समाजमा देखिएको विकृति हो। साँचो प्रेम सम्बन्धमा बसेकाले एकअर्काको संरक्षण गर्छन्। उनीहरूबीच भावनात्मक सम्बन्ध हुन्छ। तर, यसरी विभिन्न एपमार्फत स्थापित सम्बन्धमा भावना जोडिएको हुँदैन। उनीहरूको सम्बन्ध शारीरिक रूपले मात्र अगाडि बढिरहेको हुन्छ। पछि केही समस्या आयो भने एकअर्कालाई संरक्षण गर्नुको सट्टा सम्बन्धबाट टाढिने उपाय खोज्छन्। यस्ता सम्बन्धमा नचाहँदा नचाहँदै गर्भ बस्ने, विभिन्न खाले यौन रोग सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। एक दिन भेटिएको मानिससँग राम्रोसँग परिचय नै भएको हुँदैन। त्यो व्यक्तिमा कुनै यौन रोग छ÷छैन भनेर थाहा पाउन सकिँदैन। एक दिन भेटेको मानिससँग मेडिकल सर्टिफिकेट माग्ने कुरा पनि आउँदैन। जसले गर्दा एचआईभी, हेपाटाइटिस, भिरिंगीलगायत जटिल रोगका शिकार बन्न सक्छन्।
‘डेटिङ एपको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन’
इन्टरनेट चलाउँदा हरेक प्रयोगकर्ता ‘प्राइभेसी पोलिसी’ बारे जानकार हुनुपर्छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा यससम्बन्धी चेतनाको कमी देखिन्छ। जिम्मेवार भएर इन्टरनेटमा जुनसुकै एप चलाउन सकिन्छ। तर, लापर्बाही गर्दा आफूले खनेको खाल्डोमा आफैँ परिन्छ।
डेटिङ एप मात्र नभई संसारमा योसँग सम्बन्धित थुप्रै साइट पनि छन्। म्याच मेकिङ एप यसको पुरानो रूप हो। म्याच मेकिङको जस्तै अनलाइन डेटिङ एप फरक शैलीको अभ्यास हो। पहिला विवाह डट कम, म्याट्रिमोनियल नेपाल, इन्टरटेन डट कम, सादी डट कम, जीवनसाथी डट कमलगायत म्याच मेकिङ साइट प्रचलनमा थिए। केही अहिले पनि छन्।
डेटिङ एपमा व्यक्तिगत सूचना राखिएको हुन्छ। यसले गर्दा व्यक्तिको गोपनीयता भंग हुने जोखिम रहन्छ। कानुनका नजरले अनलाइन माध्यममार्फत समाज वा व्यक्तिलाई नकारात्मक असर पुर्‍याए त्यसलाई अपराध मान्छ।
विगतमा पनि डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट प्रेमको नाममा समाजमा विभिन्न खाले अपराधका घटना नभएका होइनन्। ती फरक किसिमका हुन्थे। हिजोआज प्रचलनमा आएका अनलाइन डेटिङ एप छिटो–छरितो खालका छन्। कुराकानी हुनेबित्तिकै एकअर्कासँग भेट्न सहज भयो। यो अवसर पनि हो। तर, अहिले त्यही अवसरको दुरुपयोग भइरेको छ। कुनै कुराको दुरुपयोग हुनेबित्तिकै त्यसले अपराधको रूप लिन सक्छ।
डेटिङ एपको सदुपयोगले व्यक्तिको जीवनशैलीलाई सहज बनाइदिन्छ। प्रविधिले दिएको यो सुविधालाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। कसैले एपमार्फत जानीजानी त्यसको दुरुपयोग गर्छ भने त्यो एपको गल्ती होइन। त्यसमा प्रयोगकर्ता दोषी हुन्छ। ‘डेटिङ साइट बन्द गर्नुपर्छ’, ‘यसले समाजमा विकृति ल्यायो’ भन्ने तर्कहरू व्यर्थ छन्।
डेटिङ एपले शहरमा ‘वान नाइट स्ट्यान्ड’ बढ्नु एपको दोष होइन। कुनै वयस्क व्यक्ति सहमतिमै वान नाइटका लागि जान्छ भने त्यसलाई अपराध भन्न मिल्दैन। किनकि, पछिल्लो समय ‘एडल्टरी इज नो क्राइम’ भन्ने अवधारणा आइसकेको छ। वयस्क मानिसबीच चाहना र सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध हुन्छ भने त्यो समस्या होइन। यसलाई अनैतिक काम भन्न मिल्छ तर गैरकानुनी काम भन्न मिल्दैन। तर, वयस्क भए पनि त्यो सम्बन्ध यौनधन्दाको हो भने त्यसमा कानुन लाग्छ।
अनलाइन डेटिङ एपको प्रयोग गर्दा धेरै कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। एपका शर्त र उद्देश्यबारे जानकार हुनुपर्छ। त्यसको प्राइभेसी पोलिसी कस्तो छ ? यस्तो पोलिसी कानुनसँग मेल खान्छ कि खाँदैन ? एपमार्फत कुनै गल्ती भएमा ‘ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी’ सँग त्यो एप परिचित छ कि छैन ? लगायत कुरामा प्रयोगकर्ताले ध्यान दिनुपर्छ। तर, कुरै नबुझी अनलाइन डेटिङ एपले अपराध बढाउँछ, यसले समाजमा विकराल रूप ल्याउँछ भन्नु आफैँमा गलत विश्लेषण हो। यसले गर्दा सम्पूर्ण डिजिटल र अनलाइन प्लेटफर्ममाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।
संसार फराकिलो पार्ने डेटिङ एप